Wesli (Wisconsin English Institut des langues secondes) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်LA မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက Wesli ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0peut être consulté.
Avoir un endroit sûr, souhaitable Belle et amusant
Wesli le niveau de base de l'anglais dans les écoles professionnelles0peut niveau 8 enseignement à deux niveaux. (Wesli bien sûr, à la page6de l'échantillon0sur le site « liste de l'année académique universitaire de cette année(Liste des cours de la session en cours)” တွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို့) ၀က်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ADMISSION CONDITIONNELLE OVERSEAS (PÈRE): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)
HOMESTAY avec une famille américaine: အမေရိကန်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း
ÉLÈVE (F-1) VISA: ကျောင်းသားဗီဇာ (F-1):